Raha toa moa ka ... teny maloto : comments » What if ...
Monday, December 15, 2008 - 11:38:03
Ny teny ve no maloto … sa ny eritreritra e ?
Monday, December 15, 2008 - 11:50:19
@tomavana eritreretin’ny mpihaino hoe maloto ny eritreritry ny mpiteny (na mpanoratra na mpanaparitaka hevitra). Dia mandoto ny eritreritry ny mpihaino izany ka tsy tokony hatao.
Monday, December 15, 2008 - 16:05:59
Ande nda hanoratra an’io farany io ataoko mivandravandra be za refaveo :D
Ny ahy arakaraky ny eritreritra hitenenana azy. Raha entina hanaratsiana olona sy hambaniana olona dia bof, lany andro eo fotsiny, satria ilay mpanambany no tena mirefarefa @tany.
Zavatra vitsivitsy tsy azo tenenina @ol mbola tsy dia fantatrao loatra satria mety hanohintohina ary indrindra mampifanditra: fivavahana, politika, ary fihaviana … izay voalazan’i dotmg ireo moa ny fisehony ho an’ny gasy. Mety mbola misy hafa fa mbola kamo za hieritreritra :)
Monday, December 15, 2008 - 17:36:30
@maintikely ianao tsy afaka hiblaogy ange tsy olana fa izahay mpamaky tsy hahita hovakiana intsony no hampalahelo e! Efa hita fa mampavoso olona ve dia mbola iniana atao?
Ny momba ny fiaviana, saranga sy fivavahana indray dia … tsy fanoratra amin’ny forum, blog, … internet amin’ny ankapobeny ve izany, satria ny mpamaky sy mpihaino rehetra amin’ireny dia olona tsy mbola fantatra tsara daholo.
Fanamarihana: voalaza tamin’ny lohateny moa hoe “teny maloto”, fa ho an’izay miombona dôty dia mila miteny hoe “dôty” isaky ny avy miteny maloto raha tsy izany voalako be.
Monday, December 15, 2008 - 17:59:34
>fa ho an’izay miombona dôty dia mila miteny hoe “dôty” isaky ny avy miteny maloto raha tsy izany voalako be
Sao dia mba lalàna taloha izany ? F’angaha ankehitriny tsy velezin’ny sasany na dia ireo tsy miombona “dôty” akory aza … Jereo itony ry TGV ;)
Tuesday, December 16, 2008 - 03:05:14
ity izany no ho fehezan-teny filamatra :
“tsy andevo sady tsy andriana, tsy mitady toko tsy mila andininy, sady tsy merina no tsy côtier hono i Didier Ratsiraka” : vonjeo aho Jesôsy !
Thursday, December 18, 2008 - 12:55:07
Ankoatr’ireo teny dimy ireo dia niniana tsy naseho teto ny tena teny maloto indrindra tsy azo atao ren’ny havan-dry Ramose. Raha navoakako teto mantsy io teny maloto iray io dia efa tsy nisy intsony ny what-if ohatr’izay. Sahala amin’ilay voalaza ao amin’ny toko sy andininy hoe raha miteny hoe Didier Ratsiraka ianao dia mety hahazo famelan-keloka ihany fa izay miteny an’ity teny hoe ** *** ity kosa dia tsy mba hahazo famelan-keloka mihitsy.
Inona ary ilay izy? http://jentilisa.blaogy.com/post/122/5748#comment-54042
Raha toa moa ka ... anniversera »
« Raha toa moa ka ... teny maloto (2)